China Nd: YVO4 Crystals Manufacturer and Supplier | Dien
Atomic njupụta: 1.26x1020 atom / cm3 (Nd1.0%)
Okpokoro Structure Cell oke: Zircon Tetragonal, otu ohere D4h-I4 / amd a = b = 7.1193Å, c = 6.2892Å
Njupụta: 4.22 g / cm3
Mohs ekweghị ekwe: 4-5 (Ihe yiri iko)
Mgbasawanye Mgbasa Ojuju （300K）: =a = 4.43x10-6 / K αc = 11.37x10-6 / K
Kwes Conductivity ọnụọgụ （300K）: C ： 0.0523W / cm / K
Lase wavelength: 1064nm ， 1342nm
Igwe ikuku anya a na-ahụ anya K 300K）: dno / dT = 8.5 × 10-6 / K
Kpaliri emission cross-ngalaba: 25 × 10-19cm2 @ 1064nm
Nd: YVO4 bụ kristal kachasị arụ ọrụ nke ọma maka diode pumping n'etiti kristal laser azụmaahịa dị ugbu a, ọkachasị maka obere ike dị n'etiti. Nke a bụ tumadi maka absorption na emission atụmatụ karịrị Nd: YAG. Pumped by laser diodes, Nd: YVO4 crystal has been incorporated with high NLO coefficient crystals (LBO, BBO, or KTP) to frequency-shift the output from the infrared near to green, acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ ọbụna UV. Ngwakọta a iji wuo lasers steeti siri ike bụ ngwa ọrụ laser dị mma nke nwere ike ikpuchi ngwa ngwa nke lasers, gụnyere ịkpụzi, nhazi ihe, nyocha, nyocha mkpuchi, ngosipụta ọkụ, nyocha ahụike, mbipụta laser, na nchekwa data, wdg. Egosiputala na nd: YVO4 based diode pumped solid state lasers na-ngwa ngwa bi na ahịa ndị ọdịnala na-achịkwa laser ion lasers na lasers lamped, ọkachasị mgbe achọrọ kọmpụta kọmpụta na ọpụpụ otu-longitudinal-mode.
Nd: uru nke YVO4 karịa Nd: YAG:
• Dị ka ihe dị ka okpukpu ise buru ibu na-adọrọ adọrọ nke ọma karịa bandwidth pumping dị gburugburu 808 nm (ya mere, ịdabere na mgbapụta mgbapụta mgbapụta dị ntakịrị na ike siri ike maka mmepụta otu ọnọdụ);
• Dị ka okpukpu atọ buru ibu buru ibu kpalitere nsị na lasing wavelength nke 1064nm;
• Lower lasing fọrọ nke nta na elu mkpọda arụmọrụ;
• Dị ka a uniaxial kristal na a nnukwu birefringence, emission bụ naanị a linearly polarized.
Njirimara Laser nke Nd: YVO4:
• Otu agwa mara mma nke Nd: YVO4 bụ, ma e jiri ya tụnyere Nd: YAG, ugboro 5 buru ibu ọnụọgụ nke na-ebuwanye ibu na bandwidth sara mbara gburugburu 808nm elu mgbapụta mgbapụta, nke dabara na ọkọlọtọ nke ike diodes dị elu dị ugbu a. Nke a pụtara kristal pere mpe nke enwere ike iji maka laser, na-eduga na sistemụ kọmịị kọmpat. Maka ikike mmepụta nke enyere, nke a pụtakwara ike dị ala nke laser diode na-arụ ọrụ, si otú a na-agbatịkwu ndụ nke diode laser dị oke ọnụ. Ihe sara mbara nke bandwidth nke Nd: YVO4 nke nwere ike iru 2.4 ruo 6.3 ugboro nke Nd: YAG. E wezụga ịrụ ọrụ nke ọma, ọ pụtakwara nhọrọ sara mbara nke nhọrọ diode. Nke a ga - enye aka nye ndị na - eme sistemụ laser maka nnabata sara mbara maka nhọrọ ọnụ ala.
• Nd: YVO4 kristal nwere ibu kpaliri emission cross-ngalaba, ma na 1064nm na 1342nm. Mgbe otu axis bepụrụ Nd: YVO4 kristal lasing na 1064m, ọ dị ihe dịka okpukpu anọ karịa nke Nd: YAG, ebe ọ bụ na 1340nm akụkụ ngalaba a kpaliri dị okpukpu iri na asatọ karịa, nke na-eduga na ọrụ CW kpamkpam karịa Nd: YAG na 1320nm. Ndị a na - eme Nd: YVO4 laser dị mfe iji jikwaa nsị na - esighi ike na ntanetị abụọ.
• Àgwà ọzọ dị mkpa nke Nd: YVO4 lasers bụ, n'ihi na ọ bụ uniaxial kama a elu symmetry nke cubic dị ka Nd: YAG, ọ na-ewepụta nanị a linearay polarized laser, si otú ahụ na-ezere ekwesighi birefringent mmetụta na ugboro ntụgharị. Ọ bụ ezie na ndụ Nd: YVO4 dị ihe dị ka 2.7 oge dị mkpụmkpụ karịa nke Nd: YAG, arụmọrụ ya dị elu nwere ike ịdị elu nke ọma maka imepụta ezigbo oghere laser, n'ihi nnukwu mgbapụta ya dị elu.
Njupụta Atomic 1.26 × 1020 atom / cm3 (Nd1.0%)
Nhazi nke Crystal Zircon Tetragonal, otu ohere D4h-I4 / amd
Njupụta 4.22 g / cm3
Mohs ekweghị ekwe 4-5 (Ihe yiri iko)
Kwes Mgbasawanye ọnụọgụ（300K） =a = 4.43 × 10-6 / K
Kwes Conductivity ọnụọgụ（300K） C：0.0523W / cm / K
C：0.0510W / cm / K
Lase wavelength 1064nm，1342nm
Kwes ngwa anya ọnụọgụ（300K） dno / dT = 8.5 × 10-6 / K
Kpaliri emission cross-section 25 × 10-19cm2 @ 1064nm
Fluorescent ndụ 90μ (1%)
Mkpụrụ ọnụọgụ 31.4cm-1 @ 810nm
Nnukwu ihe funahụrụ 0.02cm-1 @ 1064nm
Nweta bandwidth 0.96nm@1064nm
Mgbapụ laser ewepụtara polarization; ihe omuma ya na axis (c-axis)
Diode pumped optical to optical arụmọrụ > 60%
<λ @ 633nm <> Akụkụ nha nha（L＜(W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.2 / -0.1mm)）2.5mm（L＞(W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.2 / -0.1mm)）
(W ± 0.1mm) x (H ± 0.1mm) x (L + 0.5 / -0.1mm) (Akara ± 0.1mm) Clear oghere
Isi 95% Ewepụghị（λ / 8 @ 633 nm, λ / 4 @ 633nm）
akọrọ ihe na-erughị 2mm Elu dị elu
10/5 ọkọ / Igwu kwa Mil-O-1380A Ndekota
mma karịa 20 aak sekọnd mma karịa 20 aak sekọnd
0.15x45deg 1064nm，R＜Mkpuchi；0.2%：1064nm，R＞Mkpuchi HR，99.8%，T＞808nm
Nd, :R: YAG kristalAdreesị:
No.888, Middle Taodu Ave. Mpaghara Longquanyi, Chengdu, PRChinaEkwentị: